multi-umbala ingilazi jar ikhandlela nge lid
● Umbala nosayizi oprintiwe we-logo
● Nikeza insizakalo yesampula
● Amakhandlela embiza ethambile anombala othambile avumela ukukhanya kwelangabi ukuthi likhanye lapho livutha
● Yenziwe ngengcina yemvelo yesoya enemicu yokotini
● Amakha ethu athuthukiswa ngekhono ngawo wonke amafutha abalulekile emvelo
● Sinikezela ngamakhasimende e-ODM OEM.
Usayizi: D6.2CM * H8.1CM
1. Amakhandlela ahlangene akulungele ukuwaphatha lapho uya khona.
Ukwakha ama-atmospheres akhulisa imizwa nokuphumula kwakho, futhi kukwenza isipho esihle kunoma yisiphi isenzakalo!
3. Sicela unikeze abangani bakho noma umndeni wakho ekhaya lakho ukwelapha izinzwa ngaleli khandlela lemvelo le-wax elimnandi, ujabulele isikhathi sakho sekhwalithi nemindeni nabangane.
Usayizi: D7.2CM * H9.1CM
Isethembiso Sokukhangisa Kwamasokisi Wokunethezeka Kwamakhandlela Anephunga elimnandi
AMAKHANDLELA WOKWENZA UMBUSO WEMVELO: shisa amahora angama-45 ~ 50 ngokulinganayo ngokushisa isikhathi ngaphandle kwentuthu emnyama. Iphunga elisha nelimnandi lasekhaya, elihlukile, eliphumuzayo nelimnandi.
Iphunga limnandi futhi liyaduduza, futhi idizayini yinhle kakhulu. Sinohlu lwethu lwephunga futhi sinamakhulu ephunga ongalikhetha.
Usayizi: L10.3cm * W10.3cm * H12.2cm
Iphunga: ILavender, iVanilla, iStrawberry, iRose, njll.
Usayizi wangokwezifiso futhi uboshwe nge-wax wax
Usayizi: L200mm / 150mm / 120mm
Ithebhu yangaphambi kokufakwa i-wax
Usayizi: D2mm, L200mm / 150mm / 120mm
makhi ingilazi imbiza ngokwezifiso ikhandlela elimnandi nge metal lid
makhi ingilazi imbiza ngokwezifiso ikhandlela elimnandi
Usayizi: 8.8cm (Ububanzi) * 8.5cm (Ukuphakama)
mini mason ingilazi olunephunga elimnandi isipho
Leli khandlela lengilazi lesitsha segilasi linemibala eminingi, njengepinki / oluhlaza / oluhlaza okwesibhakabhaka / obomvu, samukela umbala wangokwezifiso
Azinabo ubuthi, ngakho-ke ngeke zibukhiphe ubuthi emoyeni njengoba busha. I-wax ye-Soy nayo inesikhathi esivuthayo sokuhamba kancane ngakho iphunga likhishwa kancane kancane futhi izinga lokushisa elibanda lipholile ukuze lihlale isikhathi eside. Sinikela ngezinhlobo ezimbili zokuqedela ikhandlela elinamakha, kufaka phakathi ingilazi epholishiwe nengilazi elinamakhaza. Uma ufuna nje ikhandlela, singakunika futhi.
Usayizi: 7.2cm (Ububanzi) * 6.3m (Ukuphakama)
Iphunga: I-Lavender, i-Rose, i-Ocean, i-Apple, njll.